Culinary Matekiniki | Chivabvu 2021
Maitiro ekuTemper Chokoreti
Tempering chokoreti haifanirwe kunge yakaoma! Dzidza maitiro ekutsamwa chokoreti iyo nzira iri nyore, mu microwave! Zvese zvaunoda ndiro uye thermometer!
Iyi ndiyo yakanakisa nzira yekufarira kunze uko. Nyore kugadzira, kuravira kunonaka, kusambobvaruka, kuchema kana kuwana nzou ganda. Iyo inofadza recipe yakakura kune vanotanga.
Maitiro Ekunamatira Mazai
Maitiro ekuisa mafuta mazai ako kumba kudzikisa njodzi yezvirwere zvinotakurwa nezvikafu. Kunyorera mazai ari nyore nyore uye kunongotora maminetsi matatu! Pasteurized mazai anogona kushandiswa kungofanana nemazai akajairwa.
Inodyiwa Glitter Recipe
Chikafu chinodyiwa chinopenya chave chiripo kwechinguva uye chakasiyana nehunyanzvi asi ini ndinofunga iyi ndiyo yakapusa nekubudirira kwazvo kupenya
Nhanho yehunyanzvi: Newb Dzidza maitiro ekugadzira yandinofarira gumpaste recipe naNicholas Lodge. Yakakwana yekugadzira yakanaka maruva eshuga.
Inodyiwa Watercolor Recipe
Murairidzi wevaeni Angela Nino weiyo Painted Bhokisi anodzidzisa maitiro aanogadzira tsika yake inodyiwa yemvura pendi anoshandisa chikafu chekudya nedoro.
Nhema Fondant Recipe
Unyanzvi hwehunyanzvi: Newb Kugadzira dema fondant kunogona kuve kunonetsa asi iyi recipe inokuratidza kuti zvingave nyore sei!
Rice Cereal Bata Recipe Yezvakavezwa Makeke Uye maTopper Iyi ndiyo nzira yangu yekugadzira mupunga wezviyo zvekutapira uye nemakeke akavezwa. Musiyano mukuru pakati peiri resipi uye wenguva dzose mupunga wezviyo
Magetsi Rainbow Fondant Recipe
Electric Rainbow Fondant Recipe Kutarisa kuti uwane muraraungu wakajeka wemavara akanaka? Usatarira kumberi! Iyi kamukira inokutorera iwo emagetsi Lisa Frank mavara iwe auri kutsvaga! 6 lbs Poda yakasviba (yakasvinwa) 3
Iyi ndiyo yangu yekutanga sheet gelatin recipe. Ini ndinoshandisa izvi kugadzira gelatin matema, mapapiro, maseiri, zvinodyiwa zvinopenya uye nezvimwe zvakawanda!
Nhanho yehunyanzvi: Newb Dzidza maitiro ekugadzira yangu gumpaste recipe naNicholas Lodge. Yakakwana yekugadzira yakanaka maruva eshuga.
Nzira Yokugadzira Nayo Pineapple Maruva
Maitiro ekuseka uye kunonaka akaomeswa pineapple maruva! Ivo vari nyore kwazvo! Ini ndaida kugadzira izvi zvevanasikana vangu Hawaiian themed birthday party!
Keke Goop Recipe (yakagadzirirwa pamba pan)
Paunenge iwe wagadzira keke goop, haumbofi wakashandisa chero chimwe chinhu. Yakanyanya nyore kugadzirwa, isingadhuri uye inoshanda nguva dzese dzekuwana makeke ako kuti abudiswe mupani. Usambofa wakatenga kuburitswa kwepani zvakare!
Maitiro Ekuita Toast Kokonati Flakes
Dzidziso yekuti tositi kokonati inovhenekera sei muchoto kuti ibudise iyo yakasarudzika uye nutty flavour iyo inouya kubva pakurova, zvakafanana nekumonisa nzungu.
Inguva yakareba sei kurega keke inotonhorera mune bundt pani
maitiro ekugadzira goridhe rinodyiwa kupenya
unoita sei chingamu kunama